नेपाली युवतीको कण्डम अनुभव ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:०७ |
-डा जया सत्याल
दाइको दुई थप्पड
बेलुनमा लागेको फोहोर टक्टक्याउदै हामी बेलुन फुक्न के लागेका थियौँ, उताबाट कड्किएको दाइको सुनियो, ‘के गर्छन् यी काम नलाग्ने केटाकेटीहरु ! जे पायो त्यही खेलेको छ ।’ उहाँ त रिसले चुर हुनुभयो । कसले टिपेको यस्तो फोहोरी चीज भन्दै मेरो गालामा दुई थप्पड हान्नुभयो । म ट्वाल्ल परें, अक्क न बक्क भएँ । टिपेको वस्तु फ्यात्त फ्याँकेर घर फर्किएँ ।
म रोईरहेकी थिएँ, अनि आमाले के भयो भनी सोध्नुभयो, टाउको दुखेको पो हो कि भन्दै सिटामोल खान दिनुभयो । तर पनि म केही बोलिन । के बोल्ने ? के–का लागि गाली रन्किए ? अड्कल गर्नै सक्दिनथेँ । तर सधै मेरो मनमा लागि नै रह्यो दाईले किन काम नलाग्ने केटाकेटी भन्नुभएको भनी । यो घटनापछि मैले फागु पूर्णिमामा पनि बेलुन किन्ने आँट गर्न सकिन् । अरु सबै बेलुन किन्थे, फुक्थे र पानी भर्थे तर म रङ्ग मात्र खेल्दथें, अरुले बेलुन खेलौ भन्दा मन छैन भनी टारी दिन्थे ।
मुसुक्क हाँसेर शिक्षक भन्थे– आफैँ पढ है ?
विद्यालयमा स्वास्थ्य विषयबारे प्रजनन् स्वास्थ्य, परिवार नियोजनजस्ता पाठको पढ्ने पालो आईपुग्ने बित्तिकै शिक्षकहरु नपढाइकन तिमीहरु आफै पढ भनी मुसुक्क हाँस्दै हिड्नुहुन्थ्यो । तपाईं आफै भन्नु त, सर मिसहरुले नपढाएको विषय हामी विद्यार्थीहरुले स्वअध्ययन गरेर कसरी बुझ्न सक्थ्यौँ र त्यसबेला ? कहिलेकाँही यो विषयमा के रहेछ भन्ने मनमा नउब्जिएको पनि हैन ।
कक्षामा सबैका अगाडि पढ्दा पनि साथीभाइहरुले जिस्काउलान् भन्ने डर थियो । फेरि सर, मिसले पनि गलत अर्थ लगाउनु होला भन्ने उस्तै पिर , अनि घरमा पढ्दा पनि दाजुभाई, दिदीबहिनीले देख्लान् भन्ने त्राही–त्राही । मौका हेरेर यसो पाना पल्टायो, अनि कसैले खोकेको सुन्यो कि हत्त न पत्त अर्कै पाना पल्टाउने गरिन्थ्यो ।
मैले आईएस्सी पढ्दै गर्दा झण्डै छ महिनाअगाडि विवाह गरेकी हितैषी साथीले फोन गरिन् । म उनको विवाहमा परीक्षाका कारण उपस्थित हुन सकेकी थिइनँ । उनले मलाई आफ्नो नयाँ घर देखाउन र आफ्ना घरका सदस्यसँग परिचय गराउन बोलाईन् । म पनि शनिवारको दिन पारेर उनको घर पुगेँ ।
यो प्रसङ्गका बेला म चिकित्सा विषयको पढाई शुरु गर्दै थिएँ । अब भने मलाई यौन र कन्डमका बारेमा धेरै बुझिसकेकी थिएँ । त्यसैले मैले मेरी साथीलाई गाली गर्न थालें । आफू र आफ्ना घरमा बस्नेबाट गल्ती हुन गए होस गराउने तिम्रो काम हो, किन चुप बस्यौ भनी सोधें ।
सुरु–सुरुमा त राम्ररी नै फ्लस भएछ । पछि त्यही त हो रबरको चिज, पानी प्रशस्त नभएको र सजिलै कुहिने नभएकाले ट्वाईलेट जाम हुन पुगेछ । म उनीहरुको घटना सुनी ट्वाल्ल परेँ । सम्झेँ, साँच्चै रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकामा हेर्नुहोस् त जताततै कन्डमको बारेमा जानकारी पाईने तर यसको उचित प्रयोग, सही विसर्जन र व्यवस्थापनको बारेमा कुनै जानकारी नदिईने । किन यस्तो भईरहेछ, किन गहिरिएर नसोचिएको हो ? साँच्चै गल्ती त हामीबाट नै भएको रहेछ, कुनै पनि विषयको बारेमा जानकारी दिँदा त्यसको बारेमा विस्तारमा ज्ञान दिनुपर्ने हो ।
कुनैपनि सामानको उत्पादन त्यसको आवश्यकताले गर्छ । आवश्यकता महसूस गरेपछि वस्तुको व्यवस्थापनबारे पनि सोचिनु पर्छ । सामानको उत्पादन परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्यको मूल्य रहन्न ।
यी घटनाले गर्दा मेरो दिमागमा कन्डमकै भूत चलेको थियो । मैले यसपछि हिँड्दा, डुल्दा, विद्यालय जाँदा, बाटोमा नियालेर हेर्न थालें । बाटोे, गल्ली, खाल्डो, हस्पिटल जताततै खुलम्खुल्ला फ्याकिएका कन्डम देखिनथाले । सहरदेखि गाउँसम्म जताततै अव्यवस्थित रुपमा फ्याँकिएका वेवारिसे रबरका खोल । हुँदाहुँदा हस्पिटल वरपर, पिकनिक स्थल, विद्यालय–कलेजका ट्वाईलेटदेखि लिएर मन्दिर परिसर वरपरसम्म पनि । अलि अध्याँरो, ओसिलो र खाल्डाखुल्डीको त कुरै छोडौं ।
यी प्रसङ्गबाट के बुझिन्छ भने सबैले यौनलाई मानिसमा उत्पन्न हुने प्राकृतिक आवश्यकताका रुपमा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो एउटा जैविक आवश्यकता हो भने अर्कोतर्फ सृष्टिलाई निरन्तरता दिने माध्यम पनि । हामी भोक लागेपछि खाना खान्छौ, भोक मेट्छौं, पाचन प्रकृया, दिसापिसाबका रुपमा शरीर बाहिर फ्याक्छौं । तर हामी दिसा, पिसाब सबैका अगाडि खुलमखल्ला गर्न सक्छौं र ? पक्कै पनि सक्दैनौं ।
(जनचेतनाका लागि डा जया सत्यालले आफ्नी आमालाई लेख्नुभएको अनुभूति पत्रबाट साभार )
Previousभाइटीकाको साइत मध्याह्न ११ बजेर ५२ मिनेटमा
Nextमहिला इन्जिनियरलाई कुर्सीमा बाँधेर जिउँदै जलाएर हत्या
श्रीमतीको यादले सताएपछि सालिक निर्माण
१३ बैशाख २०७३, सोमबार ०२:५०
नेपालीका लागि लोकल सर्च इञ्जिन नेपेडिया सार्वजनिक
२० चैत्र २०७२, शनिबार ०५:२४
रजश्वलाबारे वास्तविकता र भ्रम
२६ भाद्र २०७१, बिहीबार १५:३३
७ भाद्र २०७१, शनिबार ०९:४६